Jake Paul dia voalaza fa nitondra sarety golf namakivaky ny toerana fanatodinana sokatra tany Puerto Rico, niteraka hatezerana - Pop-Kolontsaina
Mpankafy YouTuber maro Jake Paul tezitra izy rehefa nandefa horonantsary voalaza fa nitondra sarety golf namakivaky ny toerana misy ny sokatra feno atody fano ao Puerto Rico. Bibidia voaaro amin'ny laoniny ireo sokatra.
Jake Paul, YouTuber lasa mpiady totohondry matihanina, vao haingana no hita namakivaky an'i Puerto Rico tamina kalesy golf.
Vakio ihany koa: Fanapahan-kevitra 5 ratsy indrindra ao amin'ny David Dobrik Vlogs
Betsaka ny olona tezitra amin'i Jake Paul noho ny horonantsary
Taorian'ny nisehoan'ny horonantsary dia maro ny mponina no niampanga an'i Jake ho nanararaotra ny morontsirak'izy ireo ary nampiasa azy ireo ho kianja filalaovany manokana. Namaly fatratra ilay horonantsary tamin'ny alàlan'ny Twitter ny olom-pirenenan'i Puerto Rico.
Fanamarihana ao amin'ny Twitter (Sary avy amin'ny alàlan'ny Twitter)
Betsaka ny manombatombana fa lasa tany Puerto Rico i Jake Paul mba hitsidika ny rahalahiny, Logan Paul, izay nifindra tany volana vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, gaga ny olona nahita an'i Jake tsy tamim-pitandremana momba ny atody fano tao amoron-dranomasina.
Ny olom-pirenenan'i Puerto Rico dia tonga hatramin'ny nilazana tamin'i Jake fa tsy ankasitrahana intsony izy, ary tokony 'hivoaka' izy raha tsy manaja ny kolontsain'izy ireo sy ny fiainana dia.
Vakio ihany koa: 'OMG tsy nampoizinay izany': ny fiaraha-miasan'i Valkyrae miaraka amin'i Bella Poarch ho an'ny horonantsary mozika vaovao dia mampivadi-po ny Twitter
Jake Paul tantaram-pitandremana sy fitondran-tena ratsy
Na dia tsy gaga aza ny maro, Jake Paul dia efa nanana tantara efa ela momba ny fitondran-tena tsy mendrika. Miakatra eo an-tampon'ny sehatra YouTube amin'ny alàlan'ny tranony misy ny atiny, Team 10, malaza i Jake noho ny fiangony mafy sy hadalana.
Hatramin'ny voalaza fa nisoloky ny sakaizany taloha, YouTuber, Alissa Violet, hatrany amin'ny fiampangana fanararaotana marobe, Jake dia tsy mbola noheverina ho 'olo-masina' avy amin'ny fiarahamonina YouTube.
Na eo aza ny haavon'ny areti-mandringana Covid-19 tamin'ny taona 2020 dia nandroso i Jake ary nanipy fety tao an-tranony Calabasas. Nalefa tamin'ny fahitalavitra mihitsy aza. Ho fanampin'izany, ny fiampangana fanafihana an'i Jake dia nipoitra tamin'ny fiandohan'ny taona 2021 raha nilaza ny YouTuber iray antsoina hoe Justine Paradise fa nanafika azy nandritra ny fety tamin'ny taona 2020 izy. .
Mbola tsy nifona tamin'ny olom-pirenenan'i Puerto Rico i Jake tamin'ny hetsika tsy fanajana nataony.
Vakio ihany koa: 'Mivavaha fa tsy misy olona iharan'izany': Gabbie Hanna dia miatrika fiampangana ny YouTuber Jen Dent
antony tsy ahafahan'ny vola mividy fahasambarana
inona no azoko atao rehefa mankaleo ao an-trano aho
hahita lehilahy tsara ve aho
famantarana ny fanararaotana
ny fomba hanaovana ny andro fiasana handeha haingana kokoa